LFT-G tsipika famokarana
Devolatilization tsipika famokarana
Tongasoa eto Andriamatoa Adriano sy Andriamatoa Jorge hitsidika ny orinasanay
Tonga nitsidika ny orinasanay Atoa Adriano sy Jorge niaraka tamin'i Mr Ji androany. Te-hifampiraharaha ho an'ny PVB mpanelanelana sarimihetsika famokarana tsipika izay 4000mm fitaratra laminated sarimihetsika.(CTS-120B/CTS-65B-PVB4000) Ny telo sosona rafitra dia A/B, hateviny dia 0.38mm~...
Nalefa tany Belarosia ny Barrels sy ny Screw Elements ho an'ny TE75 Twin Screw Extruder
Ny mpanjifanay dia nividy barika 19 sy singa visy 336 tamin'ny orinasanay, mamokatra araka ny sariny fotsiny izahay. Ny famokarana dia afaka mahafeno ny mpanjifa ＇ fepetra samihafa momba ny kojakoja. Ny orinasanay dia tsy mpanamboatra matihanina amin'ny kambana visy extrud ...
Ny CTS-20C Lab Twin Screw Extruder dia natolotra ny mpanjifanay
Te-hampahafantatra fohifohy ny tsipika famokarana aho. Ny tombony amin'ny laboratoara kambana visy extruder: 1. Mamonjy fitaovana: visy savaivony dia 22mm. 2. Mitahiry toerana: mampiasa modely mitambatra, maharesy lahatra ny famolavolana. 3. Olona iray no miasa. 4. Teknika, hery...
Milina fitsapana amin'ny tsipika famokarana pelletizing ambanin'ny rano ankehitriny
Te-hampiditra ny tsipika famokarana UW100 berifly aho. Ny singa fototra ao aminy: Twin screw granulator -- rafitra granulator ambanin'ny rano - silo - ecran display -- kabinetra elektrika. Ny endrika tsotra amin'ny milina dia mijoro ho injeniera nihena ho ny tena ilaina whi...
Tonga tao amin'ny orinasanay ny mpanjifa mba hizaha toetra ny tsipika famokarana biodegradable CTS-65D PLA
Tonga teto ny mpanjifa mba hizaha toetra ny tsipika famokarana biodegradable CTS-65 D PLA androany. Te-hampiditra fohifohy ny tsipika famokarana eto aho .Ny fitaovana dia PLA, voanio mangahazo ary akora hafa azo simbaina. Ny vokatra dia 300 ~ 450 kg / h, ny totalin'ny hery dia 200 kw. Ny d...
Nanjing Beyou Extrusion Machinery Co., Ltd. dia hanatrika ny CHINAPLAS 2021 any Shenzhen. Manasa anao izahay hitsidika ny tranohevanay. Foibe No.: Hall 4E01 Fotoana: 13-16 Aprily 2021 Ampio: Foibe fampirantiana eran-tany Shenzhen Miandrandra ny fampivoarana busine maharitra izahay...
nataon'ny admin tamin'ny 20-01-15
Nanjing Beyou Extrusion Machinery Co., Ltd dia manasa anao amin-kitsimpo hitsidika ny trano heva amin'ny Plastivision India 2020 ho avy. Booth No.: C2-5B Fotoana: Janoary 16-20, 2020 Add: Nesco Complex, Western Express Highway Goregaon (E), Mumbai izahay ...
Plastic & Rubber Indonezia 2019
nataon'ny admin tamin'ny 19-11-19
Nanjing Beyou Extrusion Machinery Co., Ltd dia manasa anao amin-kitsimpo hitsidika ny trano heva amin'ny Plastics & Rubber Indonesia 2019. Add.:Jakarta International ExpoKemayoran'ny Trano Foibe ...
nataon'ny admin tamin'ny 19-01-04
Ny tsipika famokarana thermoplastika vita amin'ny vera lava vita amin'ny vera lava voalohany dia natolotra tamin'ny mpanjifanay tamin'ny fotoana iray ihany, nangataka famoronana sy patanty maromaro izahay tamin'ny taona 2019. Fampisehoana sy toetra: ny tsipika famokarana extruder kambana sy kojakoja famokarana ...
Twin Screw Extruder ho an'ny Devolatilization Production Line
nataon'ny admin tamin'ny 18-03-06
Ny tsipika famokarana devolatilization voalohany dia natolotra ny mpanjifa tamin'ny taona 2018. Beyou andiany parallel co-rotating twin screw extruders, noho ny fanangonan-tsonia ara-teknika sy ny valin'ny mpanjifa, ny teknolojia matotra, ny fiasan'ny fitaovana, noraisina tsara ...
nataon'ny admin tamin'ny 17-04-12
Ny tsipika famokarana sarimihetsika PVB voalohany dia natolotra ny mpanjifa tamin'ny taona 2017. Ny tsipika famokarana sarimihetsika PVB dia amin'ny alalan'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ary ny fanavaozana, ny PVB fitaratra manelanelana sarimihetsika famokarana tsipika, dia afaka manome fomba amam-panao ...